BirdDog Release P4K - ၁ လက်မ Sony Sensor ပါ ၀ င်သော 4K Full Bandwidth NDI® PTZ ကင်မရာ | NAB သတင်းများ | 1 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » BirdDog ဖြန့်ချိ P4K - တစ်4"Sony ကအာရုံခံ Featuring တစ်ဦးက 1K အပြည့်အဝ Bandwidth NDI® PTZ ကင်မရာ
IBC 2019, 13-17 စက်တင်ဘာလ, ရပ် 6.C11- BirdDog, NDI tools တွေကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူယနေ့ယင်း၏ BirdDog P4K တစ် 4K အပြည့်အဝ bandwidth ကို NDI PTZ ကင်မရာ၏ပစ်လွှတ်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ BirdDog P4K "ဟု 1 features Sony က 14.4 သန်း pixels ကိုအတူ Exmor R CMOS backlit အာရုံခံ။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလင်း sensitivity ကိုအတူကအားလုံးကိုထုတ်လွှင့် applications များ, အားကစား, ဝေးလံခေါင်သီစတူဒီယို, သတင်းကဏ္ဍနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားရိုက်ချက်များထုတ်လုပ်ဝတ်ပြုရာအိမ်ခြေများအတွက်စံပြကင်မရာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ BirdDog P4K တစ်ခုကျယ်ပြန့်အင်္ဂါရပ်အစုံနှင့် output ကိုရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ မျိုးစုံပုံစံရွေးချယ်မှုအပါအဝင်၎င်း, အပြည့်အဝ bandwidth ကို NDI, NDI HX2, H.264, HEVC / H.265 နှင့် RTSP အဆိုပါ BirdDog P4K 6G SDI ဆိပ်ကမ်းများမှတဆင့်ရလဒ်များအတွက် Ethernet port ကိုအသုံးချနိုင်စွမ်းအပါအဝင် Workflows အမျိုးမျိုးများအတွက်သင့်လျော်သည်ကိုထောကျပံ့ခြင်းနှင့် HDMI အိုင်ပီများအတွက် 2.0 ။
အဆိုပါ BirdDog P4K ၏အခြားအင်္ဂါရပ်များ, ရှေ့နှင့်အတူနောက်ဘက်တစ် 360 ဒီဂရီ Tally ကိုစနစ်ကပါဝင်သည်နှင့်ရိုက်ချက်အတွင်းဘယ်သူ့ကိုမှသူတို့ကိုကြည့်ရှုခွင့်ပြုသည်အရာကို Tally ကိုအလင်းအိမ်ဖက်က။ Genlock အသုံးပြုသူများ Genlock input ကို အသုံးပြု. မျိုးစုံကင်မရာများတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းနိုင်ပါတယ်။ BirdDog ရဲ့လက်ရှိအပြည့်အဝ NDI PTZ အကွာအဝေးလိုပဲ, က BirdDog comm, အခမဲ့ပေး Audio ခွားစနစ်နှင့်တစ်ဦး poe ဗီဒီယို, အသံ, စနစ်, တာလီချိုး, တန်ခိုးအဘို့ကတစ်ကေဘယ်လ်ကင်မရာစေသည်လွှမ်းခြုံ။
တစ်ဦးအပိုဆောင်းအခမဲ့ firmware ကို update က BirdDog NDI ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများနှင့်ဒီကုဒ်ဒါအကွာအဝေးတွင်ထည့်သွင်း NDI ပြန်သွား Feed လည်း BirdDog P4K သို့ထည့်သွင်းထားသည်။ Feed အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦး NDI enabled ထုတ်လုပ်မှု box ထဲကထွက် PGM နှင့် Ethernet port မှတဆင့်အပြည့်အဝ NDI ထွက်စေလွှတ် 6G SDI သို့မဟုတ် HDMI2.0 ဆိပ်ကမ်းကိုဖြစ်စေသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်ထွက်ကုဒ်ခွင့်ပြုပြန်သွားရန်။ optional module တွေဖိုင်ဘာကျော် HDBaseT နှင့် SDI ပါဝင်သည်။
ဒန် Miall, BirdDog ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူ "ဟု The BirdDog P4K တို့သည်ကြီးစွာသောကင်မရာကပြောပါတယ်။ ကျနော်တို့စျေးကွက်ဤရောက်စေဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထုတ်လုပ်နိုင်သည်ဘယ်အရာကိုမြင်ရန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကဒီကင်မရာကကမ်းလှမ်း Workflows NDI ၏ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ခုလုံးအသစ်သောလမ်းကြောင်းကိုဖန်တီးသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ "
အဆိုပါ Sony က 1 " Sony က Exmor R CMOS backlit အာရုံခံတစ် 10-bit မှာအာရုံခံကိရိယာသည်နှင့် NDI4 နှင့်အတူအဆုံးသတ်ရန် 10-bit မှာလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ 10-bit မှာထောက်ခံမှုနှင့်အတူက NDI ကဲ့သို့သောအခမဲ့ tools တွေကိုသုံးပြီး feeds မှတ်တမ်းတင်ရန်အသုံးပြုသူများအဖွ NewTek NDI Monitor ။
အဆိုပါ BirdDog P4K တိုက်ရိုက်နောက်ထပ်ကွန်ပျူတာများဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုဖယ်ရှားသစ်ကို BirdDog တိမ်တိုက်ထောက်ခံပါတယ်။ BirdDog တိမ်တိုက် BirdDog တိမ်တိုက်ရဲ့ Web GUI ကိုအတွင်းဘက်ပေါင်းစုံထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြု. ကင်မရာမြင်ကွင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမည်သည့်နေရာသို့တစ်ဦး SRT link ကို၏ဖန်တီးမှုခွင့်ပြုပါတယ်။
"ကျနော်တို့နောက်ဆုံးပေါ် BirdDog ကြေညာချက်များနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြောင်း IP ကိုဗွီဒီယိုနှင့် NDI များအတွက်ကိုဆိုလိုပါတယ်အကြောင်းကိုတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်" ဟုမိုက်ကယ် Kornet, VP, NDI ကဆိုသည်။ အလွန်စတင်သူတို့ကို NDI ထုတ်ကုန်များ၏သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အစုစုကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့သည်ထွက်တည်ဆောက်ရန်စောင့်ကြည့်ပြီးကတည်းက "BirdDog တစ်ခု NDI ဆော့ဖ်ဝဲရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ BirdDog ခြမ်းတစ်လျှောက်တွင် IP ကိုဗွီဒီယိုနှင့် NDI ၏ကြီးမားတဲ့အရှိန်အဟုန်ကြီးထွားကြည့်ဖို့ဒါမှပျော်ရွှင်ပါ။ "
IBC မှာ၎င်း၏ပွဲဦးထွက်ပြုလုပ်ခြင်းသည် BirdDog P4K ပြန်လည်ရောင်းချသူများက၎င်းင်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်ကိုမှတဆင့်4၏ Q2019 များအတွက်ရေကြောင်းခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူကြိုတင်မှာယူမှုအဘို့ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
BirdDog ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး NDI ကိရိယာထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်နှင့် IP Workflows မှ baseband ဗီဒီယိုမှသင့်ရဲ့အကူးအပြောင်း simplifying ထံအပ်နှံသည်။ မဲလ်ဘုန်း, သြစတြေးလျမှထွက်နှင့်ဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ဇာတ်ဆောင်အင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူအခြေခံပြီး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် - ကြီးမြတ်စျေးနှုန်းများမှာကြီးမြတ်ထုတ်ကုန်စေ။ BirdDog မဲလ်ဘုန်းမြို့ထဲကအခြေစိုက်သြစတြေးလျကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ BirdDog အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.bird-dog.tv/.
BirdDog ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor IBC isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NDI PTZ ကင်မရာ SoftAtHome, MStar, CES2017 Sony က Exmor R CMOS backlit အာရုံခံ လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-16
ယခင်: Síminnအိုက်စလန်အတွက်ကြည့်ရှုရန်အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်၏ UHD လွှမ်းခြုံကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ MediaKind ရွေးချယ်
နောက်တစ်ခု: ContentAgent V3.8 နှင့်အတူ Vecima မိတ်ဆက်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းလုပ်ငန်းအသွားအလာ Automation